5 Xildhibaan oo lagu doortay Baydhaba (Akhriso Magacyadooda iyo sida ay kusoo baxeen) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. 5 Xildhibaan oo lagu doortay Baydhaba (Akhriso Magacyadooda iyo sida ay kusoo baxeen) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaa maanta magaalada Baydhaba lagu doortay shan xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka.
Kursiga koowaad oo ahaa HOP184 waxaa ku tartamay Wasiir Xasan Cabdinuur Cabdi iyo musharax Maxamed Cabdulaahi Cali, waxaase ku guuleystay Xasan Cabdinuur Cabdi oo hadda ah Wasiirka Tamarta Dowladda Soomaaliya.
Kursiga waxaa kusoo baxay Xasan Cabdinuur Cabdi oo helay 72 cod, halka musharaxii la tartamayay ee Maxamed Cabdulaahi Cali uu ka helay 27 cod.
Kursiga labaad HOP085 waxaa hore ugu fadhiyay Shariif Maxamed Cabdalla, waxaana kula tartamay Maxamed Xuseen Mukhtaar, wxaaana xilkiisa dib loogu doortay Shariif Maxamed Cabdalla oo helay 79 Cod, halka Musharrixii la tartamayay ee Maxamed Xuseen Mukhtaar uu helay 19-cod, waxaana halaabay 3 cod.
Kursiga saddexaad ee HOP176 waxaa ku tartamay Maxamed Mursal Maxamuud Boorow iyo Cabdixakiin Mustaf Ibraahim, waxaana kursiga kusoo baxay Maxamed Mursal Maxamuud Boorow oo kursiga horay ugu fadhiyay Baarlamaankii 10-aad. Maxamed Boorow ayaa helay 73-cod, iyadoo musharaxii la tartamayay ee Cabdixakiin Mustaf Ibraahim uu heley cod-26.
Kursiga afraad ee HOP046 waxaa ku tartamay Maxamed Wardheere Cabdi iyo Cabdulaahi Samow Cusmaan, waxaana kusoo baxay Maxamed Wardheere oo helay codad gaaraya 83-cod halka musharaxii ka heley 11-cod, iyada uu halaabay hal Cod.
Kursiga Shanaad ee HOP156 waxaa ku guuleysatay Maxamed Aadan Maxamedoo helay 88 Cod, halka musharaxii la tartamayay ee Maxamed Ibraahim isaaq uu heley 10-cod.
Previous articleWasiirka Qorsheynta oo Qoraal ku weeraray Xildhibaanka UK ee gudbiyey Mooshinka Somaliland
Next articleBarro Xildhibaanka UK ee u ololeeya Somaliland: 2 Jeer ayaa xilal Wasiir looga qaaday fadeexado qabsaday